World Tourism Network gosiputara agwaetiti Mafia dika ihe omumu
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » World Tourism Network gosiputara agwaetiti Mafia dika ihe omumu
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Na-eme mmemme maka mwepụta nke Network Tourism Network (WTN) na otu ọnwa nke ihe omume na-adọrọ mmasị site n'akụkụ ụwa niile, Mafia Island bịara na-elekwasị anya na ọrụ ọ na-eme dị ka usoro atụmatụ n'oge ọrịa COVID-19. Agwaetiti Mafia bụ agwaetiti n'ụsọ osimiri na Tanzania.
Peter Byrne bụ onye otu Board of World Tourism Network na Director maka Mafia Island arụ ọrụla na otu esi aga n'ihu njem na gburugburu COVID-19 a. N'ime ihe ngosi WTN a, ọ na-ekwu maka akụkụ nkwado nke ụlọ ọrụ ndị njem na etu esi eme nke a na Mafia Island.
Ọganihu dị afọ ole na ole gara aga siri ike n'ụzọ siri ike, Peter kọwara, ebe Mafia nwere njikọ chiri anya na Yemen na Oman yana ihe niile site na obere ruo ọkara gaa nnukwu ụlọ oriri ọhụrụ ndị na-abịa n'ịntanetị. Agbanyeghị, n'ihi COVID-19, mmụba a agawala.
N’ọnwa gara aga, ha nọ na-emepe emepe maka njem njem ha na Russia, Ukraine, na Poland. Taa, ha na-anata ndị njem 500 ruo 1,000 kwa ụbọchị bụ ndị na-anọ na nkezi ruo ihe dị ka otu izu. Nke a bụ nnukwu akụkọ na-ebute nsogbu ọhụrụ.
Ugbu a, Mafia Island na-emeso mkpa nke ọrụ na mpaghara dịka ikike ịme nri na mkpofu siri ike. Omume ochie nke ịhapụ ihe mkpofu n'ụsọ osimiri ma ọ bụ tụba ya n'ime ohia ma kwe ka gburugburu obibi mechie ya abụkwaghị nhọrọ.
Otu ihe oma oria ojoo a nyere anyi bu ohere iku ume na gburugburu ma hu ihe oru kwesiri ime n’ime ogba-adigide na “ndu ndu” nke ulo oru. Omume ohuru a nwere ndị njem na-achọ ezigbo ebe okike dị mma ileta.
Iji nụ ihe banyere isiokwu a, lee vidiyo ahụ:
Juergen Thomas Steinmetz, onye guzobere World Tourism Network, kwuru ka WTN malite, ha enweelarị ihe omume 12, ha niile nwere ike ịbụ lere anya na nti ebe a.
Chọrọ ịghọ onye otu Network Tourism Network? Pịa na www.wtn.travel/register
BANYERE ETWA njegharị NETWORK
World Tourism Network bụ olu dị ogologo oge nke obere na obere ụlọ ọrụ (SMEs) na njem na njem njem gburugburu ụwa. Site na ijikota mbo mbo, WTN na ebute ezigbo mkpa na ebumnuche nke ulo oru ndia na ndi otua. Netwọk ahụ na-enye olu maka SMEs na nzukọ ndị njem nlegharị anya yana netwọkụ dị mkpa maka ndị otu ya na-anọchite anya mba 120.